मद्यपान तथा धुम्रपानले रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति घटाउँछ • Health News Nepal
अहिले कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिले धुम्रपान तथा मद्यपान गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो निकै दुःखद छ । मद्यपान तथा धुम्रपानले रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति घटाउँछ । त्यसैले मद्यपान तथा धुम्रपानबाट टाढै बस्नु पर्छ । मानसिक एवं शारिरीक रुपमा स्वस्थ राख्न व्यवस्थापन पक्षले सम्बन्धित चिकित्सकहरुसँग पनि परामर्श गर्ने वा जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
हालकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपरे कसरी गर्ने भनेर विभागले नयाँ निर्देशिका तयार गरेको छ । यस बिषयमा केन्द्रीत रहेर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत सह प्राध्यापक एवं वरिष्ठ छाति रोग विशेषज्ञ डा. निरज बमसँग गरेको कुराकानीको आधारमा
१.सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगमा के–के सावधानीका उपाय अपनाउनु पर्छ ?
निजी वा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा सावधानि अपनाउनु पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्ड अनुसारका उपायहरु अपनाउनु पर्छ । गाडिमा चढ्नु अघि र पछि साबुन पानीले हात मिचिमिचि धुने गर्नुपर्छ । साबुन पानी नभएको अवस्थामा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ । त्यस्तै सवारी साधनको ह्याण्डिल, स्टेरिङ लगायतलाई डिसइन्फेक्सन गर्नु पर्छ । सवारी साधन भरसक एकजनाले मात्र चलाउनु पर्छ । यदि , सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने हो भने यात्रा गर्नु अघि र पछि साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम गर्नु पर्छ । सार्वजनिक यातायातमा पहिला जस्तो कोचाकोच गरि यात्रु राख्नु हुँदैन । आधा यात्रु राखेर दुरी कायम गरि साधन चलाउनु पर्छ । यात्रु चढने र झर्ने क्रममा पनि सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम राख्नु पर्छ ।
२. गाडिमा पैसा दिने लिने क्रममा कोरोना भाइरस सर्छ की सर्दैन ? कसरी जोगिने ?
पैसाबाट सर्छ ÷सर्दैन भन्ने बारे अझैं पुष्टि भइसकेको छैन । हामीसमेत अनविज्ञ छौं । तर, पैसा लेनदेन गर्दा सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम राख्नु पर्छ । पैसा गन्दाखेरी र पैसा लिंदा तथा दिंदा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
३. एटीएम मेसिन कसरी प्रयोग गर्ने ?
एटिएम मेशिनमा प्रवेश गर्दा भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ । एटीएम कार्ड मेशिनमा प्रवेश गराएर घर फर्किसकेपछि अनिवार्य हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
४. होटल–रेस्टुँरा जाँदा वा खानेकुरा मगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के हुन् ?
होटल तथा रेष्टुरेन्ट भीडभाड हुने स्थलमा पर्छन । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा कार्यरत कामदार संक्रमण मुक्त रहेको ग्राहकलाई थाहा पनि हुँदैन । त्यसैले भरसक जानु हुँदैन । जानै पर्ने अवस्था आए भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ । यदि प्याकिंग गरिएको र सुरक्षित छ भन्ने निश्चित भएमा पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ । प्याकिंग खोले पछि हात हुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ । खाइसकेपछि पनि सुरक्षित ढंगल बिसर्जन गर्नु पर्छ ।
५. मोबाइल अरूलाई (फोटो खिच्न, टिकटक बनाउन, नम्बर सेभ गर्न, आफ्नो फोनबाट अरूलाई कुरा गर्न आदि) दिने कि नदिने?
मोबाइल व्यक्तिगत हुन्छ । आफुले मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ फोटो खिच्न, टिकटक बनाउन, नम्बर सेभ गर्न वा आफ्नो फोनबाट अरुलाई कुरा गर्न भरसक दिनु हुँदैन । मोबाइलको सतहमा भाइरस रहन सक्ने भएकोले सकेसम्म अरुलाई दिनु हुँदैन ।
६. मास्क, सेनिटाइजर र पानीको अभाव भएका ठाउँमा रहेका व्यक्तिले कसरी सावधानी अपनाउने ?
मास्क , सेनिटाइजर र पानीको अभाव भएका ठाउँमा रुमाल, टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाँच्छिउँ आयो वा खोकी लाग्यो भने कुहिनोको भागतिर गर्नु पर्छ । भरसक, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर अन्यत्रबाट मगाएर भएपनि पकेटमा राखिराख्ने र प्रयोग गर्नु पर्छ । जहाँसुकै पनि सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम राख्नु पर्छ ।
७. क्वारेन्टाइनको कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ?
यो व्यवस्थापकीय पक्ष हो । व्यवस्थापन पक्षले यस कुरामा गम्भीर भएर शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा रहँदा व्यवस्थापनका साथै व्यक्ति स्वयंले पनि सावधानि अपनाउनु पर्छ । भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा साबुन पानीले हात धुने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ । रुमाल , टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्नु पर्छ । व्यक्तिगत सरसफाईमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । नियमित नुहाउनुपर्छ।
Pingback: दाइजो एक कुप्रथा - डा. सि.के सिंह • Health News Nepal